Medical Writings for Over 18: Q and A Over 18 Readings (124)
1.3လတားဆေးက ခုချက်ချင်းထိုး ခုချက်ချင်းအသုံးပြုလို့ ရပါသလား။
2. AIDS အကြောင်းဖတ်ချင်လို့ဆရာ။ အားရင်လင့်ခ် လေးတစ်ခုလောက်ညွှန်းပေးပါဆရာ။
3. ကျွန်မသူငယ်ချင်း အသက် ၄ဝ ရှိ ရန်ကုန်တွင်နေသူ ယောက်ျားလေးမှာ
4. ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးအတွက်မေးချင်လို့ပါ။ အမျိုးသမီးက ဝန်ထမ်းပါ။
5. ဓမ္မတာ လာတာ က တော့ ပုံမှန်၇က်ကို လာပါတယ် ဒေါက်တာ။
6. ဘယ်နှကြိမ်ဆက်ဆံဆက်ဆံ ဆက်ဆံပြီးရာသီလာရင် ကိုယ်ဝန်မရဘူးပေါ့နော်ဆရာ။
7. သမီးက ယခု (့) မှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
8. B ပိုးအကြောင်းသိချင်လို့ပါဆရာ။
9. လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ခန့်က ကျွန်တော် ဘွဲ့ယူရန်သွားချိန် ကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ 10. ရာသီလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
11. ပုံမှန်ရာသီလာတဲ့ရက်နဲ့ Ecee2 သောက်ပြီးငါးရက်အကြာမှာ
12. ကျမရဲ့ကိုယ်ဝန်က အခု (16) ပါတ်ရှိနေပါပြီရှင့်။
13. Ecee2 ဆေးသောက်နည်းမှန်ပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလားဆရာ။
14. ကိုယ်ဝန်ရှိလို့ အော့အန်ခြင်း မူးဝေခြင်းစတဲ့ လက္ခာဏာတွေက 15. ကျွန်မပြောရန် မေ့သွားသည့် အချက်မှာ ကျွန်မသည် အိမ်ထောင်ရှိပါသည်။
Sat, Feb 23, 2013 at 7:54 AM
3 လတားဆေးက ခုချက်ချင်းထိုး ခုချက်ချင်းအသုံးပြုလို့ ရပါသလား။
တားဆေး စားဆေး နဲ့ ထိုးဆေးတွေက ၇ ရက်ကြာမှသာ ထိရောက် ကောင်းတယ်။ မတိုင်ခင် အကာအကွယ် တနည်းနည်း သုံးသင့်ပါတယ်။
Depo injection ကို ရာသီ စဆင်းတဲ့ နေ့ကနေ ၅ ရက်အတွင်း ထိုးရင် ချက်ချင်း ထိရောက်တယ်။ ၅ ရက်နောက်မှ ထိုးရင် ၂ ပါတ်ကြာမှ ထိရောက်တယ်။
Depo Provera သုံးလခံ ထိုးဆေး Fri, Feb 22, 2013 at 8:22 PM
AIDS အကြောင်းဖတ်ချင်လို့ဆရာ။ အားရင်လင့်ခ် လေးတစ်ခုလောက်ညွှန်းပေးပါဆရာ။
HIV latest news သတင်းများ http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2012/05/hiv-latest-news.htmlAIDS themes HIV medicines Side effects (1) ART ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးများ http://dts-medicaleducation-adult.blogspot.in/2013/01/hiv-medicines-side-effects-1-art.html
Fri, Feb 22, 2013 at 7:27 PM
ကျွန်မသူငယ်ချင်း အသက် ၄ဝ ရှိ ရန်ကုန်တွင်နေသူ ယောက်ျားလေးမှာ စက်ဘီး ၁ဝ ရက်လောက်ဆက်တိုက် နင်းပြီး ယနေ့မှာ ဆီးသွားရာတွင် အနီရောင်ဘက်သန်းနေသည်ဟု ပြောပါသည်။ အဲဒါကြောင့်ဘာဆေးများသောက် သင့်သည်ကို ဆရာ့အနေဖြင့် ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပေးပါရှင့်။
Urethritis in Men ယောက်ျားတွေ ဆီးအောင့်ရင် UTI ဆီးလမ်းရောဂါ ပိုဖြစ်နေကြတယ် Fri, Feb 22, 2013 at 7:25 PM
ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးအတွက် မေးချင်လို့ပါ။ အမျိုးသမီးက ဝန်ထမ်းပါ။ သူရာထူးစာမေးပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေချိန်ပါ။ ဒီရက် ပိုင်း ဓမ္မတာလာတော့ သူစာတွေလည်း မလုပ်နိုင်ပဲ အိပ်အိပ်ပျော်သွားပါတယ်။ နေ့လည်ပိုင်းတွေမှာ။ စာမေးပွဲနီးနေတော့ သူစာမလုပ်နိုင်မှာစိုးနေပါတယ်။ စိတ်စုစည်းမှူလည်း အားနည်းပါတယ်။ ဘာဆေးသောက်သင့်ပါလဲဆရာ။ ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်ပါလဲ။ • PMS Symptoms ရာသီမလာခင်ဖြစ်ချင်တာတွေ
Fri, Feb 22, 2013 at 6:50 PM
ဓမ္မတာ လာတာကတော့ ပုံမှန်ရက်ကို လာပါတယ် ဒေါက်တာ။ လာလို့ရှိရင် တော်တော်နည်းပါတယ်။ တခါလာရင် ၂ ရက်တည်းပါ။ လိပ်ခေါင်းက ခွဲပြီးတာ တပတ်ကျော်၂လောက်ပဲ ၇ှိပါသေးတယ် ဒေါက်တာ။ ကောင်းကောင်း အနာ မကျက်သေးပါဘူး။ တီဘီ အတွက် ဓါတ်မှန်ရိုက်ပြီး စစ်ဆေးပြီပါပြီ။ မရှိပါဘူး ဒေါက်တာ၊ ဗိုက်ထဲမှာက အသံတွေ မြည်နေတယ် ဒေါက်တာ။ ပျို့နေတယ်။ နေလို့ မကောင်းဘူး။ အခုလို ပြန်ပြီး ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတာတွေက ခွဲစိတ်ကုသထားလို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ အနေအစား မခွဲခင်ကလိုမဟုတ်တာလဲပါမယ်။ လိပ်ခေါင်းခွဲထားလို့ အစာလမ်းမှာ အရင်လို နေသားမကျသေးဘူး။ အနေအစား မှန်လာရင် ကောင်းသွားမှာပါ။ လေများနေတာအတွက် လေဆေးတခုခုသောက်နိုင်တယ်။ ဝမ်းပျော့အောင်ဂရုစိုက်ပါ။ ဝမ်းလဲ မချုပ်စေပါနဲ့။ ပျို့ချင်တာလဲ လေများလို့ကနေဆက်ဖြစ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ တကယ်အန်ချင်ရင် အအန်သက်သာဆေး တခုခုသောက်ပါ။ ဆရာရေးထားတာရှိပါတယ်။ ဘယ်ဆေးမျိုးကို လက်လှမ်းမီလဲမသိလို့ တိတိကျကျမပြောချင်ပါ။
Fri, Feb 22, 2013 at 5:30 PM
ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဆက်ဆံဆက်ဆံ ဆက်ဆံပြီးရာသီလာရင် ကိုယ်ဝန်မရဘူးပေါ့နော်ဆရာ။
အမျိုးသမီးတဦး ရာသီလာနေတယ်ဆိုရင် ဒိအရင်က ဘယ်လိုနေနေ နေခဲ့တာတွေကြောင့် ကိုယ်ဝန်မရစေခဲ့ပါ။ ရာသီဆိုပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျလို့ သွေးဆင်းတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်တယ်ဆိုတာမှာလဲ ရှိမှန်းမသိပဲ ပျက်တာလဲရှိတတ်တယ်။ ဆေးတခုခုသောက်လို့လဲဖြစ်နိုင်တယ်။
သမီးက ယခု (့) မှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ အလုပ်ထဲမှာတော့ အပူများပါတယ်ဆရာ။ သမီးအသက် ၃၃ နှစ် အိမ်ထောင်သက် ၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ သမီးမှာ ယခု ကိုယ်ဝန် တလရှိနေပါတယ်။ ခံစားနေရတာက ရင်တွေ အရမ်းတုန်ပြီး အဖြူတွေလဲ ဆင်းနေပါတယ်။ စားပြီးတိုင်းလဲ ပျို့အန်ချင်ပြီး မလုပ်ချင်မကိုင်ချင်ဖြစ်နေလို့ပါဆရာ။ ဘယ်လိုနေထိုင် စားသောက်သင့်တယ်။ ဘယ်ဆေးမျိုး သောက်သင့်တယ်။ မစားသင့်တဲ့အစားအစာမျိုးပါ တခါတည်းညွှန်ကြား ပြသပေးပါဆရာ။ သားဦးဆိုတော့ အမှားအယွင်းဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။ နဂိုကတည်းက သမီးရဲ့ အသားအရေက ပူတယ်ဆရာ။ Pregnancy and Morning sickness ကိုယ်ဝန်ရှိစ အိပ်ရာထရောဂါ Fri, Feb 22, 2013 at 1:39 PM
B ပိုးအကြောင်းသိချင်လို့ပါဆရာ။ C ပိုးဆိုတာ B ပိုးကတစ်ဆင့်ဖြစ်တာ ဟုတ်ပါသလားဆရာ။ ဖြစ်ရင် ကုဖို့ လွယ်ကူပါသလားဆရာ။
Hepatitis B အသဲရောင် ဘီ ပိုး • Hepatitis A, B, C, D, E, G အသဲရောင်ရောဂါများ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/01/hepatitis-b-c-d-e.html
Fri, Feb 22, 2013 at 1:36 PM
လွန်ခ့သော ၂ ပတ်ခန့်က ကျွန်တော် ဘွဲ့ယူရန်သွားချိန် ကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ ကျွန်တော်မှားခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ဒုံးတော့ ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆက်ဆံနေရင်နဲ့ ကျွတ်သွားတယ်ထင်လို့ စိတ်ချရအောင် Duet ဆေးကို (ကိုယ်ဝန်တားဆေး) ဆေးဆိုင်က မေးပြီးဝယ် တိုက်မိပါတယ်။ ဆေးက ၂ ပြားပါ။ ပထမ ၁ ပြားသောက်ပြီး ၁၂ နာရီအတွင်း နောက် ၁ ပြား သောက်ရတာပါ။ ဆေးညွှန်းအတိုင်းပဲ။ ၂၄ နာရီ ကျာ်ပြီးမှ တိုက်လိုက်ပါတယ်။ ဆေးက ၇၂ နာရီ အတွင်းရတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ ဆေးသောက်ပြီး ၃ ရက်အကြာမှာ ကျွန်တော့်ကောင်မလေး သွေးစဆင်းပါတယ်။ သွေးဆင်းတာ နည်းပေမယ့် ခုထိမရပ်သေးပါဘူး။ သွေးဆင်းတာ ဒီနေ့ထိဆို ၈ ရက် ၉ ရက်လောက်ရှိပါပြီ။ အခု ကျွန်တော်က ရန်ကုန် ရောက်နေပါတယ်။ နယ်ကို ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြဘို့ခေါ်နေပါတယ်။ အခု ကိစ္စအရေးကြီးပါသလား။ ဆေးညွှန်းထဲမှာတော့ အော့အန်တာ၊ ခေါင်းမူးတာ၊ သွေးဆင်မမှန်တာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ရေးထားပေမယ့် ရက်က ကြာနေလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ၊ စိတ်ပူရလား ဆိုတာတွေကို ဆရာအနေနဲ့ အမြန်ဆုံး အကြောင်းပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကောင်မလေး အသက်က ၂၂ နှစ်ပါ။ အရေးပေါ်တားဆေးသောက်ရင် တယောက်နဲ့တယောက် ဖြစ်လာတာ မတူပါ။ မိန်းကလေးရဲ့ ရာသီရက်၊ အတူနေတာနဲ့ ဆေးသောက်ချိန်အကွာအဝေး စတာတွေအရ မတူတာဖြစ်တယ်။ သွေးဆင်းရင် ကိုယ်ဝန်အတွက်တော့ စိုးရိမ်းရာ မလိုပါ။ ကုန်အောင်ဆင်းပါမယ်။ လူက နေကောင်းနေရင် စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ သွေးဆင်းများသူတိုင်း မူးတာ၊ မောတာဖြစ်တတ်တယ်။ နားရမယ်၊ ရေ၊ အရည်များများသောက်ပါ။ ဗီတာမင် စီ ၅ဝဝ အား တနေ့ ၂ ကြိမ်သောက်နိုင်တယ်။ သံဓါတ်အားဆေး ကြာကြာဆက်သောက်နေရမယ်။ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ခံစားရတာလဲ တယောက်နဲ့ တယောက်မတူကြပါ။ ခံစားရလဲ မကြာပါ။
Fri, Feb 22, 2013 at 12:08 PM
ရာသီလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ အခုဆို 22 ရက်နေ့တောင်ရှိနေပြီ။ ရှေ့တစ်လကလဲမလာဘူး။ လာမယ်ဆိုရင် 25 26 လောက်ဆိုလာနေကျပါ။ စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ မလာမှာဆိုးရိမ်နေတယ်။ ဘာဆေးတွေသောက်ပြီး လာအောင်လုပ်ရမလဲ။ ရာသီလာခါနီးရင် ရင်ဘက်ထိပ်ကလေးတွေ နာတက်တယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ့လကလဲ နာပါတယ် ဒါပေမယ့် မလာပါဘူး။ အခုလဲ နည်းနည်းတော့နာတယ်။ မလာမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်။ သမီးမှာ ကိုယ်ဝန်မရှိတာတော့ ကျိန်းသေပါတယ်။ ဆီးလဲစစ်ပြီးပါပြီ။ ဆရာပြောတဲ့ ကူးစက်ရောဂါဆိုတာကိုလဲ ဆရာပို့ပေးတဲ့ စာတွေကနေ ဖတ်ကြည့်ရသလောက်တော့ သမီးနဲ့တူတာတစ်ခုမှမတွေ့ပါဘူး။ မတူဆို သမီးမှာ ရောဂါလက္ခဏာ တစ်ခုမှကို မပြပါဘူး။ ရိုးရိုးသာမာန်ပဲ ဗိုက်အောင့်တာ နာတာလဲမရှိသလို အလေးချိန်လျှော့သွားတာတွေ တိုးလာတာတွေလဲမရှိပါဘူး။ အနာပေါက်တာတွေလဲမဖြစ်ပါဘူး။ အဖြူဆင်းတယ်ဆိုတာကလဲ သာမာန်လောက်ပဲ ဆင်းတာပါ။ အရမ်းကြီး များနေတာမျိူးမရှိဘူး။(ဟိုတစ်လောကပြောသလို အရောင်နဲ့ အဖြူဆင်းတယ်ဆိုတာလဲ ခဏတစ်ဖြုတ်လေးပဲဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းလုံးဝ လုံးဝကိုမဆင်းတော့ပါ)။ စိုးရိမ်လို့ ကေသီပန်လိုမျိုး သွေးဆေး သောက်ပြစ်လိုက်ရမလား။ ဘယ်လိုမျိုးဆေးတွေသောက်သုံးသင့်လဲ။ နောက်ပိုင်းမှန်လာအောင်လဲ ဘယ်လို ဆက်ပြီးဂရုစိုက်ရမလဲ။ အိမ်ထောင်ပြုရင် သားသမီးယူဖို့ဆန္ဒရှိသူဆိုတော့ ရာသီမှန်အောင် အခုထဲက ဂရုစိုက်ချင်လို့ပါ။
ရာသီမှန်ချင်ရင် မလွယ်နည်းကတော့ အိမ်ထောင်ရှိရှိ။ မရှိရှိ ကိုယ်ဝန်တားဆေး သောက်ရမယ်။ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးပါ၊ လူအများသောက်တဲ့၊ ဈေးလဲချို၊ ဝယ်ရတာလဲ မခက်တဲ့၊ တနေ့ ၁ လုံး၊ တလ ၂၈ လုံးပါတားဆေးကို ပုံမှန် ၃-၄ လသောက်ပါ။
Fri, Feb 22, 2013 at 12:35 PM
ပုံမှန်ရာသီလာတဲ့ရက်နဲ့ Ecee2 သောက်ပြီးငါးရက်အကြာမှာ အနည်းငယ်လာတဲ့ရက် ဘယ်ရက်ကိုအတည်ယူရမလဲဆရာ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက နောက်လလာမယ့်ရက်ကို ဘယ်ရက်ယူရမလဲဆရာ ပုံမှန်လာတဲ့ရက်လား Ecee2 သောက်ပြီး ပြောင်းတဲ့ရက်လားဆရာ။
အရေးပေါ်တားဆေးကြောင့် ရာသီရက်ပြောင်းမယ်။ နောက်ဆုံးသွေးစဆင်းတဲ့ရက်ကိုပဲ ယူရတော့မယ်။
ကျမရဲ့ကိုယ်ဝန်က အခု (16) ပါတ်ရှိနေပါပြီရှင့်။ အသက်က (29)နှစ်ပါရှင့်။ သားဦးကိုယ်ဝန်သည်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက နယ်မြို့တစ်မြို့ကပါရှင့်။ ဆရာရဲ့ မလိုချင်သောကိုယ်ဝန်မှာ “၁၃-၂၂ ပါတ် အထိကိုယ်ဝန်ကို Misoprostol (Cytotec) တမျိုးထဲနဲ့ဖျက်ခြင်း၊ Misoprostol 400mcg ကို မွေးလမ်းကြောင်းကနေ ၃ နာရီတခါ၊ ပေါင်း ၅ ခါထည့်ပါ။” လို့ရေးထားတာ ဖတ်ရပါတယ်ရှင့်။ ဆိုင်မှာမေးကြည့်တော့ 200mcg ပဲရှိတယ်တဲ့ဆရာ အဲ့ဒါဆို တစ်ခါထည့်ရင် (၂)လုံးထည့်ရမှာလားဟင်။ နောက်ပြီး ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မရှိပဲ သောက်ရင် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း သိချင်လို့ပါရှင့်။ သားအိမ်ခြစ်ဖို့ကော လိုလားဟင်။ ဘယ်လို treatment မျိုးတွေ ဆက်လုပ်ဖို့လိုပါသလဲဆရာရှင့်။ ကျမက အလုပ်တဖက်နဲ့ ဆိုတော့လေ စနေနှင့်တနင်္ဂနွေပိတ်ရက်(၂)ရက်ပဲ အချိန်ရပါတယ်ရှင့်။ တရက်တည်းအကုန်ကျပါသလားရှင့်။အနားယူဖို့ လိုသလားဟင် ဘယ်နှစ်ရက်လောက်အချိန်ယူရပါလဲရှင့်။ ဆရာ့ကို မေးခွန်းတွေအများကြီးမေးလိုက်ရလို့ အရမ်းအားနာပါတယ်ရှင့်။
ဆောရီး။ ဆရာက ကိုယ်ဝန်ကို တမင်တကာဖျက်တာအတွက် ဆေးစာသာရေးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဖျက်မပေးပါ။ ဖျက်ဘို့လည်း ဆေးမညွှန်ပါ။
Fri, Feb 22, 2013 at 11:06 AM
Ecee2 ဆေးသောက်နည်းမှန်ပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါသလားဆရာ။
Emergency pills Effectiveness အရေးပေါ်တားဆေး ထိရောက်မှု Fri, Feb 22, 2013 at 8:03 AM
ကိုယ်ဝန်ရှိလို့ အော့အန်ခြင်း မူးဝေခြင်းစတဲ့ လက္ခာဏာတွေက ဘယ်ချိန်လောက်မှာစတင်ဖြစ်တာပါလဲဆရာ။ ကိုယ်ဝန်ရင့်မှာသိတာပါလား။ ဆရာမနေ့ကပို့လိုက်တဲ့ ဆေးခန်းကိုလှူဖို့ဆက်သွယ်တဲ့ဟာကြီးကို ကျွန်တော်နားလည်ဘူးဆရာ။ ဘယ်လိုစဆက်သွယ်ရမလဲမသိဘူး။
မေးတဲ့သူက ဘယ်မှာနေလဲ မသိပါ။ ဘယ်ပိုက်ဆံအမျိုးအစားပို့ချင်လဲ မသိပါ။ ဘဏ်စာရင်းရှိလား မသိပါ။ ပို့ထားတာက (၁) အမေရိကန် ဒေါ်လာသုံးသူများက ဘဏ်ငွေလွဲစနစ်နဲ့ပို့နည်း နဲ့ (၂) ချက်လက်မှတ်ရေးပြီး စာတိုက်ကပို့နည်းဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကဆိုရင် လူကြုံကနေသာပို့တာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘုရားဖူလူကြုံကနေပို့ရတာ များပါတယ်။ Western Union ဆိုရင် မြန်တော့မြန်ပေမဲ့ ကုန်ကျစရိတ်များတယ်။